‘सहरका योजनामा आलोपालो भ्रष्टाचार हुन्छ’ | Nagarik News - Nepal Republic Media
२३ असार २०७७ मंगलबार
‘सहरका योजनामा आलोपालो भ्रष्टाचार हुन्छ’
७ फाल्गुन २०७४ ९ मिनेट पाठ
पारस खड्का, क्रिकेटर
तपाईंलाई मनपरेको सहर कुन हो ?
मलाई अस्ट्रेलियाको मेलबर्न सिटी ज्यादै सुन्दर लाग्यो । यो सहर अति नै व्यवस्थित छ । यहाँ बस्ने पनि अनुशासित छन् । कुनै पनि काम गर्दा एकले अर्कोलाई अवरोध गर्दैनन्, बरु सहयोग गर्छन् । सहरमा देखिने हरेक चिज नयाँ र आकर्षक लाग्छन् । खुला ठाउँ पनि प्रशस्त छन् ।
नेपालका सहर कस्तो लाग्छ ?
हरेक देशका सहरको आफ्नै विशेषता र मौलिकता हुन्छ । हाम्रा सहरमा पनि आफ्नै मौलिकता र रहनसहन पाइन्छ । नेपालका सहर अरु देशका सहरभन्दा धेरै नै मौलिक छन् । यहाँका सहरमा पुरानो संस्कृति र इतिहास भेटिन्छ । विदेशका सहरमा उस्तै–उस्तै खाले विशेषता पाइन्छन् ।
हाम्रै देशको कुन सहर मनपर्यो ?
जस्तोसुकै भए पनि हरेकलाई आफ्नो जन्मथलो प्यारो लाग्छ । म काठमाडौंमै हुर्किएको भएर होला, मलाई यो ठाउँ राम्रो लाग्छ । मैले आफ्नो करिअर पनि यहीँबाट सुरु गरेको हुँ । काठमाडौं नेपालको सुविधायुक्त सहर हो । यो सहरमा हजारौँ मानिसले अवसर पाएका छन् । यहाँको मौसम विश्वका कुनै पनि देशका सहरमा पाइन्न ।
काठमाडौंको अस्तव्यस्तता देखी दिक्क लाग्दैन ?
हरेक अवसर भएको ठाउँका रूपमा हामीले उपत्यकालाई लिन्छौँ । यसलाई रोजगार र अवसरको खानी पनि ठान्छौँ । उपत्यकाबाहिरका राम्रा ठाउँ देख्दैनौँ । यहाँ भएका सेवा–सुविधा समयमै अन्त विकेन्द्रीकरण गरेको भए आज काठमाडौं यति कोलाहल र अस्तव्यस्त हुने थिएन । सहरवासीले यति धेरै दुःख पाउने थिएनन् । कुनै पनि सहर व्यवस्थित बन्न त्यहाँको व्यवस्थापन पक्ष पनि राम्रो हुनुपर्छ ।
सरकार र नागरिक दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ । हाम्रा सहर बिग्रनुको मुख्य कारण सही व्यवस्थापन नहुनु नै हो । माथिल्लो निकायमा बस्ने र सहर विकास गर्ने अभिभारा बोकेको नेतृत्वले सही ढंगले काम गरेको भए सहर धेरै व्यवस्थित बन्थ्यो होला । हामीकहाँ त सहरका योजनामा आलोपालो भ्रष्टाचार हुन्छ । सरकारी वा राजनीतिक शक्तिमा हुने व्यक्तिले सङ्लो मनले काम गरेका छैनन्, त्यसैले पनि सहर बिग्रिएको हो ।
नेपालबाहिर कुनु–कुन देश पुग्नुभएको छ ?
अस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलंका, अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड लगायत झन्डै २० देश पुगेको छु । बाहिरी मुलुकका देश आधुनिक अवधारणाअनुसार विकास भइरहेका छन् ।
नेपालबाहिर कुन–कुन सहर घुम्नुभयो ?
मेलबर्न, बोस्टन, लन्डन, कोलम्बो, टोकियो, सिकागो लगायत सहर घुमेको छु । यी सहर निकै व्यवस्थित र सफा–सुग्घर छन् ।
तपाईंको विचारमा सहर कस्तो हुनुपर्छ ?
सहर भन्नेबित्तिकै सुविधायुक्त र सफा हुनुपर्छ । सहरका हरेक पक्ष व्यवस्थित हुनुपर्छ । एकले अर्कोलाई हेप्नु हुँदैन । सहरको विकासमा सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । हाम्रोमा सहर भन्नेबित्तिकै धेरैले काठमाडौंलाई मात्र सम्झन्छन् । उपत्यका बाहिरका सहर पनि सुन्दर छन् । यहाँका सबै सेवा–सुविधा अन्तका सहरमा पनि सारेको भए काठमाडौं अलि खुकुलो हुने थियो । अब त मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ, यसले पनि उपत्यकाका सेवा–सुविधा अन्त पुर्याउनेछ । मानिसको चाप बढी भएकाले उपत्यकाको हावापानी प्रदूषित भएको हो ।
काठमाडौंलाई व्यवस्थित पार्न के गर्नुपर्ला ?
काठमाडौंबाहिरका सहरलाई पनि सुविधायुक्त बनाउनुप¥यो । अहिले भइरहेको विकास, निर्माणलाई छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ सबैले ध्यान दिनुप¥यो । काठमाडौं आफैँमा नराम्रो सहर होइन । मानिसकै कारण बिग्रिएको सहर हो, काठमाडौं । यहाँ बस्ने सबै जिम्मेवार भइदिएको भए आज काठमाडौं यति फोहोर हुने थिएन । दुई–तीनवटा विषय मात्रै ध्यान दिनसके काठमाडौं अन्य सहरभन्दा सुन्दर बन्न सक्छ ।
काठमाडौंबाहिर कुन–कुन सहर राम्रो लाग्यो ?
उपत्यकाभन्दा बाहिरका धेरै सहर सुन्दर छन् । नेपालका हरेक सहरको आ–आफ्नै विशेषता छ । मलाई काठमाडौंबाहेक पोखरा, विराटनगर, नेपालगन्ज, धनगढी र धरान पनि राम्रो लाग्छ । हरेक सहरमा नेपालको मौलिकपन र वास्तविकता झल्केको पाइन्छ । हिजोको हाम्रो समाज कस्तो थियो भन्ने कुरा हामै्र सहरले पनि बोलेका छन् ।
काठमाडौंको मनपर्ने पक्ष के हो ?
उपत्यकाको सबैभन्दा राम्रो लाग्ने पक्ष मौसम हो । यहाँको हावापानी सदावहार छ । यस्तो किसिमको हावापानी संसारमा अन्त पाइँदैनजस्तो लाग्छ । उपत्यकामा ऐतिहासिक मठ–मन्दिर र जात्रा–पर्व पनि छन् ।
मननपर्ने पक्ष के हुन् ?
यहाँको धुवाँधुलो, ट्राफिक जाम, भीडभाड मनपर्दैन । ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण राजधानीवासीले धेरै समस्या खेप्नुपरेको छ । सडक निर्माणलाई समयमै नसक्दा अहिले उपत्यकाको सबैतिर प्रदूषण बढेको छ । जताततै धुलो मात्रै देखिन्छ ।
यस्ता समस्या समाधानका लागि के गर्नुपर्ला ?
सरकारी निकायबीच आपसी समन्वय हुनुपर्यो । सबै निकायले पारदर्शी ढंगले काम गर्नुप¥यो । उपत्यकाको सरसफाइ, बाटोघाटो निर्माण, व्यवस्थित पार्क, ट्राफिक व्यवस्थापन, धुवाँधुलो रोकथामलगायत विषय केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो भने समस्या तुरुन्तै समाधान हुन सक्छ ।
तपाईंको सपनाको सहर कस्तो होस् भन्ने लाग्छ ?
म बसेको सहर स्वच्छ, सफा, हरियाली र शान्त होस् । यातायातलगायत सहरमा हुने हर सुविधा होस् ।
विदेशका सहर र हाम्रा सहरबीच के भिन्नता पाउनुभयो ?
विदेशी र हाम्रा सहरलाई दाँज्न मिल्दैन । हाम्रा सहरको विशेषता विदेशी सहरमा भेटिँदैन । विदेशी सहरमा पाइने विशेषता हाम्रा सहरमा भेटिँदैन । हाम्रा सहरको मौलिकता र ऐतिहासिक पक्ष देशको भन्दा भिन्न छ।
पछिल्लो समय घुमेको सहर कुन हो ?
पछिल्लो समय खेलकै सिलसिलामा नामिबिया पुगेको थिएँ । खेल सकिएको दिन त्यहाँका केही सहर पनि घुमेका थियौँ ।
काठमाडौंनजिकै घुम्न जानुपर्यो भने कुन ठाउँ रोज्नुहुन्छ ?
उपत्यकानजिकै घुम्ने र रमाइलो गर्ने पर्याप्त ठाउँ छैनन् । नगरकोट, धुलिखेल, ककनीलगायत ठाउँ जाने गरेको छु ।
काठमाडौं उपत्यकाको मनपर्ने खानेकुरा के हो ?
मलाई यहाँको मःमः ज्यादै मिठो लाग्छ । यहाँको जस्तो मःमः उपत्यकाभन्दा बाहिरका सहरमा पाइनँ ।
प्रस्तुति :शिवहरि घिमिरे
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७४ १०:५९ सोमबार
सहरका योजनामा आलोपालो भ्रष्टाचार हुन्छ
पोखरामा यातायात व्यवसायीले बैंकलाई बुझाए गाडीको चाबी
३२ देशका वैज्ञानिक भन्छन् : काेराेना हावामै मिसिएकाे पाइयाे
हाम्रो उचाइअनुसार तौल कति हुनुपर्छ ?
किस्ता तिर्न नसकिने भयो: यातायात व्यवसायी
मास्क नलगाई घरबाहिर हिँडे कारबाही हुने
सरिता गिरी पार्टीबाट निष्कासित, सांसद पद पनि गुम्यो
‘लकडाउनले ४ महिना समस्या पार्दैमा घुँडा टेक्दैनौं’
समन्वय अभावले कोरिया जाने चार हजार रोकिए
एआइजी थापा २८ औ प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त
सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा (आइजीपी) मा प्रहरी अतिरिक्त महानीरिक्षक (एआईजी) शैलेश थापा क्षत्रीलाई नियुक्त गरेको छ । २८ औ महानिरीक्षकको लागि एआईजीद्धय थापा र हरिबहादुर पाल दौडमा भएपनि सरकारले थापालाई नियुक्त गरेको हो । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले उनलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको हो ।
क्वारेन्टिन रित्तिदै, आइसोलेसनमा थपिदैँ
स्वदेश तथा विदेशबाट भित्रिनेका लागि जुम्लामा झण्डै ८ सय वटा बेडका क्वारेन्टिन निर्माण भए । प्रत्येक स्थानीय तहका विद्यालय र सामुदायीक भवनमा क्वारेन्टिन बने । सबै क्वारेन्टिनमा भारत तथा नेपाल भित्रबाट आएकाहरुले भरिभराउ भए । तर पछिल्लो समयमा यहाँका क्वारेन्टिन रित्तिन थालेका छन् ।
बर्खामा सधै पहिरोको त्रास
बर्खा सुरु भएसँगै सुदूरपहाडी जिल्लामा पहिरोको जोखिम बढने गरेको छ। पहाडी धरातल, सडक निर्माणलगायत मानवीय संरचनाको कारण बर्खायाममा पहिरोले जनधनको क्षति गर्दे आएको छ। गत शनिबार मात्रै बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका–८ मल्लेसमा गाउँमाथिबाट आएको पहिरोले ७ जनाले ज्यान गुमाए भने लाखौको धनमाल क्षति भयो।
मेलम्ची खानेपानी सुरुङ परीक्षण : स्थानीय क्रुद्ध, पानीको रोयल्टी माग
मेलम्ची पानी काठमाडौं उपत्यकामा बितरण गर्नुअघि नै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पाउनुपर्ने रोयल्टीको सुनिश्चितता गर्न आयोजनास्थलका सरोकारवालाले माग गरेका छन्। साथै उनीहरूले स्थानीयलाई थाहै नदिइ मेलम्ची पानी पथान्तरण(सुरुङमा छिराउने) गरिएको भन्दै खेदसमेत व्यक्त गरेका छन्।